इन्जिनियरिङ नेटवर्क: वर्गीकरण, prektirovaniya विशेषताहरु
हाल, ईन्जिनियरिङ् को नेटवर्क कुनै पनि घरमा छ। यो बिना आधुनिक घर कल्पना गर्न असम्भव छ। इन्जिनियरिङ नेटवर्क एक ताप प्रणाली, ढल र पानी छैन। विशेषज्ञहरु को परियोजनाहरू आफ्नो थप शोषण नागरिक सुविधाको लागि सबै माथि संरचना, आन्तरिक र बाह्य बनाउन। व्यवसायी प्रणाली नेटवर्क ईन्जिनियरिङ् र निर्माण गुणस्तर र योग्य बनाउन धेरै वर्ष को लागि पछिल्लो हुनेछ।
ईन्जिनियरिङ् संचार को आन्तरिक परियोजनाहरू
यी विन्यास तल संकेत प्रणाली समावेश गर्नुहोस्।
मल र पानी आपूर्ति।
आगो सूचना मानिसहरूलाई।
ईन्जिनियरिङ् प्रणाली को बाहिरी डिजाइन
कन्फिगरेसन डाटा तल दिइएका नेटवर्क समावेश गर्नुहोस्।
प्राकृतिक ग्याँस पाइपलाइन।
ढल र पाइपलाइन।
संचार र बाह्य प्रकाश।
सुरुङ र नाली।
संरचना को प्रणाली सतह पानी सफाई को लागि अभिप्रेरित।
ईन्जिनियरिङ् नेटवर्क को निर्माण अत्यंत ध्यान र सावधानी आवश्यक रूपमा डिजाइनर, आफ्नो काम गर्न जिम्मेवार मनोवृत्ति छ। त्यहाँ एक सिस्टम को एक अप्रत्याशित विफलता छ भने, त्यसपछि सबै बाँकी जोखिम गरिनेछ। इन्जिनियरिङ सेवा ईन्जिनियरिङ् नेटवर्क विकास हुन्छ भनी एउटा संगठनले प्रदान, एक वा बढी संचार को एक व्यापक गणना छ। यस्तै गतिविधिमा संलग्न छन् जो व्यवसायी, आफ्नो कर्तव्य को प्रदर्शन लापरवाही को अस्तित्व अनुमति हुँदैन। यो काम गर्न गम्भीर मनोवृत्ति मानव जीवन बोक्न प्रकोप संग fraught छ।
वेंटिलेशन र वातानुकूलन
यस्तो प्रणाली डिजाइन धेरै चरणमा स्थान लिन्छ। सुरुमा लगभग योजना छ। अर्को, ग्राहक को खाता इच्छा ले। तिनीहरूलाई आधारित तदनुसार संशोधन गरिनेछ। यो बनेको छ मात्र पछि परियोजना "समाप्त"। योजना मा काम गर्दा वेंटिलेशन विशेषज्ञहरु प्राविधिक गणना को एक श्रृंखला पूरा गर्नुपर्छ। यो निकास को अंक को संख्या गणना र हावा प्रणाली आपूर्ति गर्न परिसर र यसको मात्रा उपयुक्ततामाथि जाँच आवश्यक छ। सबै आवश्यक माप को समाप्ति पछि व्यवसायीक उपकरण, सामाग्री र स्थापना को अनुमानित लागत गणना गर्न आवश्यक छ। तिनीहरूले पनि यी सबै काम को मिति निर्धारण गर्नुपर्छ।
शरद ऋतु-जाडो अवधिमा घरमा सान्त्वना डिजाइन गर्मी गुणस्तर निर्भर छन्। प्रभावकारी बनाउन क्रममा भएको ताप सिस्टम को योजना, विशेषज्ञहरु गर्मी हानि को उपस्थिति मा घरहरू जाँच्न आवश्यक छ। तिनीहरूले विषय मा आइपुग्दा र प्रत्येक घर घरमा सबै आवश्यक माप बनाउन निर्धारित। कर्मचारी ढोका, Windows र पर्खालहरु को स्थिति जाँच गर्न आवश्यक छ। घर को अवस्था मूल्यांकन, सबै डाटा प्राप्त गरेपछि यो संरचना लागि अधिकतम ताप प्रणाली परियोजना बनेको छ। हावा वा पानी: विशेषज्ञहरूले ताप दुई प्रकार को एक लागू चयन हुन सक्छ। यी प्रकार प्रत्येक यसको आफ्नै फाइदा र व्यक्तिगत भवनहरु को डिजाइन मा खातामा लिएको छन् बेफाइदा छ।
को नाली जस्तै पानी आपूर्ति प्रणाली आन्तरिक र बाह्य: दुई प्रकारका भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। मिक्सर, शौचालय, सिंक र सफाई को लागि एक फिल्टर: पहिलो उपकरण को परिसर पानी आपूर्ति र स्थापनाको लागि पाइप को एक ठूलो संख्या ताराहरु शामिल। दोस्रो ईन्जिनियरिङ् नेटवर्क केन्द्रीय नाली मा कटौती गर्ने एक लाइन हो।
पानी आपूर्ति विशेषताहरु
पानी आपूर्ति प्रणाली, परियोजना घरहरू धेरै जिम्मेवार छ। त्यो बाह्य प्रणाली बाट परिसर प्रवेश गर्छ। 75 ° सी को अधिकतम तापक्रम गर्न घरमा आपूर्ति गर्न तातो एकै समयमा, पानी पिउने सहित चिसो पानी, बाहिर 30 ° सी को एक तापमान मा लगे छ पानी केंद्रीकृत सिस्टम प्रवेश गर्छ। आपूर्ति यस्तो सतह (नदी, reservoirs, पोखरी) र रूपमा प्राकृतिक स्रोतबाट आउँछ भूमिगत।
यस प्रकारका ईन्जिनियरिङ् प्रणाली fecal बर्बाद सफाई को लागि संरचना प्रदान गर्नुहोस्। यो एक केन्द्रीय ढल प्रणाली मा माउन्ट हुन अनिवार्य छ। भित्री सिस्टम डिजाइन धेरै प्लास्टिक ट्यूब मलजल उपकरण (स्नान, शौचालय र स्नान) द्वारा खुवाइन्छ जो हुन्छन्।
यस्तो ईन्जिनियरिङ् नेटवर्क मात्र भवन नियमहरु को आधार मा डिजाइन गरिएको छ। योजना बनाउन ग्राहक को इच्छा मा निर्भर गर्दछ, यो जहाँ स्थापना हुनेछ सकेट र स्विच निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ। प्रत्येक तत्व, बिजुली संग आपूर्ति छ जो, मस्यौदा प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ।
काठ र यसको विशेषताहरु को सुकाउने
बेलग्रेड HPP: सामान्य जानकारी
आणविक शक्ति बिरुवाहरु। युक्रेनमा आणविक शक्ति बिरुवाहरु। रूसी आणविक प्लान्ट
युद्ध बारे बेलारूसी फिलिमहरु, र मात्र ...
चाँडै र सजिलै घर मा पेट र नितम्ब हटाउन
Andzhelo Dandi: जीवनी, रचनात्मकता र फोटो
Scorpio-मुसा: को zodiacal संयोजन को एक प्रतिनिधि रूपमा महिला
दूरबीन Nikon: मोडेल र समीक्षा को समीक्षा
जो अल्ट्रासोनिक सफाई व्यक्ति contraindications छ?
को रहस्यमय विकिरण संकेत के हो? तपाईं विकिरण को एक चिन्ह देखेको छ के आशा गर्ने?
Ralf घन्टी: समीक्षा र जूता कम्पनी